Muhle. Ifulethi lesitudiyo isigamu sebhlokhi ukusuka ogwini.
Ifulethi le-studio elinethezekile eliyingxenye yebhlokhi ukusuka ogwini. Inedamu lokubhukuda, i-balcony enokubukwa kolwandle nendawo yokushuka. Eduze kwezindawo zokudlela nezitolo ezinkulu. Ifakwe ngokugcwele. Konke okusha.
Ukuze uthole ukuphepha, isibambo kufanele sikhokhelwe ukulawula ukungena esakhiweni. Inezindleko ezingu-$8,000 ngomuntu ngamunye, okufanele zikhokhelwe yisivakashi ngqo esakhiweni. Ine-Intelligent Lock esebenza nekhadi, uma kwenzeka ilahleka inani lingu-$100,000 okufanele likhokhwe yisivakashi.
Ifulethi lesitudiyo isigamu sebhlokhi ukusuka ogwini, linovulandi obuka ulwandle. Ukhululekile futhi ethokomele. Lesi sakhiwo siphinde sibe ne-swimming pool yaso, nendawo yokuphumula kanye nokushukwa kwesikhumba.
4.83 ·105 okushiwo abanye
Indawo yezentengiselwano, lapho uzothola khona izitolo ezinkulu, izindawo zokudlela kanye nezohwebo ngokujwayelekile eduze kakhulu.
Kunomuntu wendawo otholakalayo ukuze amukele izivakashi, athamele futhi axazulule izinkathazo zazo.
Inombolo yepholisi: 71779